Android အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ် Compass | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျီပီအက်စ် & ခရီးသွား Apps ကပ » Android အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ် Compass
အန်းဒရွိုက် APK ကိုများအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ် Compass
⭐Youအကောင်းဆုံးကိုသံလိုက်အိမ်မြှောင် app ကိုမှတဆင့်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့လမ်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ Android အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်သံလိုက်အိမ်မြှောင်သံလိုက်အိမ်မြှောင်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကဒစ်ဂျစ်တယ်သံလိုက်အိမ်မြှောင်ထိုကဲ့သို့သောခရီးသွား, ပျော်ပွဲစား, စခန်းတောင်တက်သို့မဟုတ်ယောက်မှာအဖြစ်သင့်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအများစုအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
⭐စမတ်သံလိုက်အိမ်မြှောင်အခမဲ့ GPS စနစ်သံလိုက်အိမ်မြှောင်သည်နှင့်အစာရှောင်ခြင်းစတင်သည်။ ဒါဟာအားလုံးသံလိုက်အိမ်မြှောင် app ရဲ့အရှိဆုံးတိကျသောင်နှင့်မြင့်မားနှင့်အဓိပ္ပါယ် display ကိုထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ Android အတွက် Smart သံလိုက်အိမ်မြှောင်သံလိုက်စက်ကွင်းများနှင့်စစ်မှန်သောမြောက်ဘက် device ကိုရဲ့ Real-time orientation ကိုပြသရာ, တစ်ဦးကိုမှန်ကန်သံလိုက်အိမ်မြှောင်ဖြစ်ပါတယ်။
Android အတွက်⭐ဒစ်ဂျစ်တယ်သံလိုက်အိမ်မြှောင် Built-in သံလိုက်အာရုံခံကိရိယာကို အသုံးပြု. ဝက်ဝံ (azimuth) ကိုရှာမယ့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ နှင့်သံလိုက်အိမ်မြှောင်ရဲ့ချောမွေ့နှင့်သဘာလည်ပတ်အစစ်အမှန်သံလိုက်အိမ်မြှောင်ကဲ့သို့အရူပဖြစ်ပါတယ်။
⭐Thereစျေးကွက်အပေါ်အများကြီးသံလိုက်အိမ်မြှောင် apps များဖြစ်ကြသည်ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအများစုဟာ GPS စနစ်အပေါ်အခါတိကျစွာအလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်သာ America မှာတိကျစွာအလုပ်လုပ်ပေမယ့်သြစတြေးလျနှင့်အာရှအတွက်လျော့နည်းတိကျမှုဖြစ်စေ။ စမတ်သံလိုက်အိမ်မြှောင် app ကိုအတိအကျသင့်ကိရိယာ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်မူတည်အဖြစ် GPS စနစ်သံလိုက်အိမ်မြှောင် app ကိုလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်တိကျစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကတိသည်ဆိုပါက, သင်ကသံလိုက်field.🔔Featuresကြောင့်ထိခိုက်ခံရဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးကျေးဇူးပြုပြီး: 🔔
- ဒစ်ဂျစ်တယ် format နဲ့။
- အရည်အသွေးမြင့် user interface ကို။
- သင် resolution ကိုတစ်ဦးအဆင်ပြေလမ်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်မြင့်မားသောမျက်နှာပြင်သုံးနိုင်သည်။
- အကောင့်အသစ်များ၏ Coordinate ။
- ဒါဟာကိုယ့်တဦးတည်းဦးတည်ချက်မရှိ, သငျသညျမြားကိုလညျးအဓိကနှင့်အလယ်အလတ်လမ်းညွန်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
- Professional က။
ဒစ်ဂျစ်တယ်သံလိုက်အိမ်မြှောင်ကိုအောက်ပါဘာသာစကားများကို support: အင်္ဂလိပ်, စပိန်, ပေါ်တူဂီ, ရုရှ, ဗီယက်နမ်, အငျဒိုနီးရှား, ဂျာမန်နှင့်ပြင်သစ် ...
သင်သည်မည်သည့်ပြဿနာများလျှောက်လွှာကို install သို့မဟုတ်သုံးပြီးရှိပါကမေးလ်က e-mail ကိုမှတဆင့်အသင်းဖွံ့ဖြိုး applications များဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဆက်သွယ်နှင့်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး theproblem ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
NEW !!! Android အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်သံလိုက်အိမ်မြှောင်
Android အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ် Compass
11.46 ကို MB
Gyro Compass App ကို ...
Pro ကိုသံလိုက်အိမ်မြှောင် Maps ကို ...
ဒစ်ဂျစ်တယ်သံလိုက်အိမ်မြှောင် - ...